FREE VIDEO CONVERTERS NA RUSSIAN - WINDOWS - 2019
Free video converters na Russian
Nyocha a na-enye ihe kachasị mma, dị ka onye dere ya si kwuo, ndị na-emegharị vidio na Russian, yana akọwa nkenke na njirimara dị na ha. Ihe ka ọtụtụ n'ime gị maara na vidiyo ahụ na - abịa n'ụdị dịgasị iche iche - AVI, MP4, MPEG, MOV, MKV, FLV, mgbe ụfọdụ n'ime ha vidiyo nwere ike gbanwee na ọtụtụ ụzọ. O di nwute, ọ bụghị mgbe ọ bụla ngwaọrụ ọ bụla na-egwu usoro ọkpụkpọ vidio ọ bụla, na nke a, a ghaghị ịgbanye vidiyo gaa na usoro akwadoro, nke nwere ndị ntụgharị vidiyo. M ga-agbalịa inye nkọwa kachasị oke maka ngbangharịrị vidiyo na ebe ị ga-ebudata usoro ndị dị mkpa maka n'efu (site n'aka ndị isi obodo, n'ezie).
Ọ dị mkpa: mgbe edechara nyocha ahụ, a chọpụtara na ka oge na-aga, ụfọdụ n'ime mmemme ndị ahụ a chọrọ iji wụnye kọmputa achọghị ya mgbe ọ na-arụ ọrụ. O nwekwara ike imetụta mmemme ndị ọzọ, ya mere enwere m ike ikwu na ị na-ebudata installer ahụ, etinyela ya ozugbo, ma lelee na virustotal.com. Hụkwa: Ngwá ọrụ ntanetịime vidio kachasị mma, Mbudata ihe ntanetị dị n'ịntanetị na Russian, Free Wondershare video converter.
2017 melite: Isiokwu ahụ gbakwunyere onye ntụgharị video ọzọ, n'echiche nke m, ọ dị mma na ihe dị mfe na ọrụ maka onye ọrụ novice; ndị na-emegharị vidiyo abụọ na-enweghị nkwado nke asụsụ Russian, ma nke dị elu dị elu, gbakwụnyere. Ọzọkwa, agbakwunyere ịdọ aka ná ntị banyere atụmatụ ụfọdụ nke ụfọdụ n'ime mmemme ndị edere (ntinye nke ngwanrọ ọzọ, ọdịdị nke akara mmiri na vidio mgbe a gbanwechara).
Convertilla - mfe ntụgharị vidiyo
Onye na-emegharị vidio free Convertilla bụ ezigbo maka ndị ọrụ ndị na-adịghị mkpa ọtụtụ nhọrọ na ọrụ ndị ọzọ, ihe niile ha chọrọ bụ iji tọghata vidio ma ọ bụ ihe nkiri na otu, nkọwa nke aka (na Taabụ taabụ) ma ọ bụ ile na gam akporo, iPhone ma ọ bụ iPad ( na Ngwaọrụ Ngwaọrụ).
Usoro a n'efu anaghị enye ihe ọ bụla na-achọghị software mgbe arụnyere, a sụgharịrị ya n'ụzọ zuru ezu na Russian ma na-agbanwegharị vidiyo n'enweghị ihe ọ bụla.
Ihe omuma na ibudata: Tigharite bu ihe omimi vidio n'efu na Russian.
VSDC Free Video Ihe Ntụgharị
VSDC na-ekpo ọkụ na-emegharị ihe na-enweghị ihe ọ bụla bụ otu ihe dị mfe maka onye ọrụ novice ma dị elu maka ihe ndị dị mkpa maka ndị maara ụdị ntinye vidiyo na usoro codec ị chọrọ inweta.
Onye ntụgharị ahụ nwere ma ntọala nke na-ahapụ gị ka ị gbanwee faịlụ ọ bụla, DVD ma ọ bụ setịpụ faịlụ iji mee ihe na ngwaọrụ achọrọ (Android, iPhone, PlayStation na Xbox, wdg), yana ike iji aka ha dozie ntọala ndị dị ka:
A kapịrị ọnụ kapịrị ọnụ (gụnyere MP4 H.264, nke a na-ahụkarị ma na-akwado ugbu a), nhazi ya, gụnyere mkpebi nke vidiyo ikpeazụ, okpokolo agba kwa nkeji, ọnụego bit.
Nhọrọ nchekwa ederede.
Na mgbakwunye, VSDC Free Video Converter nwere ihe ndị ọzọ na-esonụ:
Ọkụ ọkụ na vidiyo.
Ijikọta vidiyo ọtụtụ n'ime otu, ma ọ bụ, ọzọ, ikike ịkewaa vidiyo ogologo n'ime ọtụtụ mkpirikpi.
Download VSDC video converter na Russian site na saịtị ọrụ site http://www.videosoftdev.com/ru/free-video-converter
Abụọ ndị ọzọ na-emegharị vidiyo
Ndị na-emegharị vidiyo abụọ na-esonụ enweghị mgbasa ozi Russian, ma ọ bụrụ na nke a adịghị mkpa maka gị, ana m ekwusi ike na iji ha, dịka ha bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka ịgbanwere usoro usoro vidio.
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ mgbe ị na-agbanwe faịlụ vidio, gbalịa nhọrọ abụọ a, ọ ga-abụkwa na ị ga-enwe afọ ojuju n'ọrụ ha:
Onye ọ bụla n'ime ndị na-ekirikiri vidio a nwere ọrụ ndị ọzọ ma e jiri ya tụnyere mmemme ndị a kọwaworo, nke na-enye ohere ọ bụghị naanị iji tọghata faịlụ mgbasa ozi, kamakwa iji mee ka ihe dị mma, kọọpụta ya, gụnyere ịkụda na ịmegharị vidiyo, ịmepụta mkpụrụ edemede, nhazi usoro na codec, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ a, ngwaahịa abụọ a ga-abụ nhọrọ kacha mma.
Ihe ọ bụla Video Converter Free - ntụgharị vidiyo dị mfe maka ndị ọrụ novice.
Imirikiti mmemme ndị na-ekwe ka ị gbanwee usoro vidio dị nnọọ nhịahụ maka ndị ọrụ na-amaghị ọrụ nke na-amaghị ihe dị iche iche nke usoro, na-amaghị ihe vidiyo ndị dị, nwere ike ọ gaghị aghọta ihe kpatara eji akpọ kọmputa AVI na kọmpụta, nke abụọ abughi. Onye ọ bụla Video Converter Free anaghị achọ ihe ọmụma na nkà pụrụ iche - dị nnọọ họrọ faịlụ isi, họrọ profaịlụ nke ịchọrọ ịbupu faịlụ ahụ site na ụdị dịgasị iche iche: ọ bụrụ na ịchọrọ iji tọghata vidio maka ikiri na mbadamba gam akporo ma ọ bụ Apple iPad, ị nwere ike gosipụta nke a ozugbo mgbe ị na-agbanwe. Ịnwekwara ike ịmepụta profaịlụ nke gị maka ntụgharị vidiyo, nke nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ịnwe mkpebi ihuenyo na-abụghị ọkwa na ọtụtụ ikpe ndị ọzọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ "Tọghata" wee nweta ihe a chọrọ.
N'otu oge ahụ, nke a abụghị ọrụ nile nke usoro ihe a: ikike mmezi na-enye gị ohere iwepụ vidiyo ma tinye mmetụta ụfọdụ - mụbaa nkọcha, belata mkpọtụ, gbanwee ọkụ na ọdịiche nke vidiyo ahụ. Ihe omume ahụ na-akwado ịdekọ vidio na DVD.
N'ime mmejọ nke onye na-emegharị vidiyo a, onye ọ bụla nwere ike ịkọwa ya na-adịghị ike arụmọrụ na, n'agbanyeghị na eziokwu ahụ na-egosi na ọ nwere ike iji ike NVidia CUDA mgbe ị gbanwee, nke a enyeghị mbelata pụrụ iche n'oge achọrọ maka ntọghata. N'ọnọdụ ndị yiri ya, ụfọdụ ihe omume ndị ọzọ gosipụtara ngwa ngwa.
Nbudata ihe ọ bụla Video Converter ebe a: http://www.any-video-converter.com/ru/any-video-converter-free.php (kpachara anya, enwere ike ịnye ngwanrọ ndị ọzọ n'oge nrụnye).
Usoro nhazi usoro ihe omume (Format Factory) na-enye ezigbo nguzozi n'etiti ike nke iji na faịlụ vidiyo nke nnweghari mgbanwe (usoro a na-arụ ọrụ ọ bụghị nanị na faịlụ vidio, ọ na-enyekwa gị ohere ịmegharị ọdịyo, foto na akwụkwọ).
Nhazi Ụlọ ọrụ dị mfe iji - họrọ ụdị faịlụ ịchọrọ ịmepụta, gbakwunye faịlụ ị chọrọ iji tọghata ma kọwaa nkọwa zuru ezu maka usoro nke faịlụ natara: dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-edeba faịlụ na MP4 usoro, ị nwere ike ịhọrọ codec eji mee mgbe ị na - DivX, XviD ma ọ bụ H264, ntinye vidiyo, ụda ọnụ ọgụgụ, codec eji maka ọdịyo, wdg. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịgbakwunye ndepụta okwu ma ọ bụ akara mmiri.
Ọzọkwa, dịka na mmemme ndị a na-enyocha na mbụ, enwere profaịlụ dị iche iche na usoro ntọala, na-enye ohere inweta vidio ahụ n'ụzọ ziri ezi, ọbụna nye onye ọrụ ọhụụ ahụ n'onwe ya.
Ya mere, njikọta dị mfe nke iji na atụmatụ ndị dị elu nke usoro ihe a mgbe ị na-emegharị vidiyo, nakwa dị ka ọtụtụ njirimara ọzọ (dịka ọmụmaatụ, ịmepụta GIF ngosi na AVI ma ọ bụ wepụ ụda site na faịlụ vidio), Sistem ntụgharị vidiyo nwere ike ịkpọ otu n'ime mmemme kacha mma na nyocha a.Otú ọ dị A hụla mmemme ahụ na wụnye software achọghị, kpachara anya mgbe ị wụnye. Na ule m, a na-atụ aro ka ị wụnye ihe omume na-adịghị emerụ ahụ nke nwere ike ịjụ, mana enweghị m ike ikwu na na gị.
Ịnwere ike ibudata Usoro Ụlọ ọrụ maka n'efu na Russian site na saịtị http://www.pcfreetime.com/formatfactory/index.php (ị nwere ike ịme ka asụsụ Russian na saịtị ahụ dị n'elu aka nri).
Nbudata DVDVideoSoft Russian: Video Converter, Free Studio
Nwelite 2017: mmemme ahụ akwụsịla ịbụ nke zuru oke site na ịtinye vidiyo na vidiyo na-agbanwe agbanwe na inye ịzụta ikikere.
DVDVideoSoft Onye Mmepụta na-enye gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịdọta ma ọ bụ iche iche Free Video Converter na Free Studio - otu setịpụrụ ọtụtụ mmemme free maka ọtụtụ ebumnuche:
Dekọọ vidiyo na egwu na diski ma ọ bụ site na disk na kọmputa
Zigharịa vidiyo na egwu dị iche iche
Dekọọ vidiyo na Skype
Na-arụ ọrụ foto 3D na nke 3D
Na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ịtụgharị vidiyo na usoro ihe omume yiri nke ahụ, naanị ihe ị ga-ebu ụzọ chọpụta ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị, dabere na ma gbanwere vidiyo - maka nlele na ekwentị ma ọ bụ ọkpụkpọ DVD ma ọ bụ maka ebumnuche ndị ọzọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-eme ihe nile site na igirigi ole na ole nke òké - họrọ isi iyi, profaịlụ nke onye ntaneti vidiyo ga-arụ ọrụ wee pịa "gbanwee".
Ọ bụrụ na enweghi profaịlụ kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịmepụta onwe gị: dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta vidiyo na mkpebi nke 1024 site na 768 pikselụ na ụda okpomoku 25 kwa nke abụọ, ị nwere ike ime ya. N'ihe banyere ọrụ nke onye na-emegharị ihe nkiri Studio Free, onye nwere ike ịdebanye ọsọ ọsọ na enweghị nkwado maka ịtụgharị na ụdị MPEG-2. Usoro ihe omume ndị ọzọ na-akpata enweghị mkpesa.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị ike ma bụrụ onye nwegharịrị ihe nkiri vidio n'efu, yana ihe ngwaọrụ ndị ọzọ maka ịrụ ọrụ na faịlụ vidiyo, Free Studio ma ọ bụ naanị Free Video Converter ga-abụ ezigbo nhọrọ.
Ịnwere ike ibudata nsụgharị nsụgharị nke Free Studio software na Free Video Converter si na ụlọọrụ DVDVideoSoft ọrụ - http://www.dvdvideosoft.com/ru/free-dvd-video-software-download.htm
Freemake Video Ihe Ntụgharị
Ọzọ video converter nwere interface na Russian bụ Freemake Video Ihe Ntụgharị. Akụrụngwa a na-akwado nkwado maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro faịlụ vidiyo na ọdịyo. Tụkwasị na nke ahụ, ihe omume ahụ na-enye gị ohere iji tọghata DVD na AVI, MP4 na usoro faịlụ ọzọ maka igwe ma ọ bụ mbadamba.
Mgbe ịbubata ihe nkiri ndị dị mkpa n'ime usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike iwepu vidiyo site na iji nchịkọta vidiyo dị mfe. E nwekwara ohere dị mfe ịkọwa kachasị ihe nkiri, jikọta ọtụtụ vidiyo na otu ihe nkiri na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbe ị na-emegharị vidiyo, ị nwere ike ịhọrọ codec, mkpebi, ụda ọnụ ọgụgụ, ugboro na ọnụ ọgụgụ nke ọwa egwu. Mgbe mbupụ, Apple, Samsung, Nokia na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ akwado - ị nwere ike ezipụta ngwaọrụ ịchọrọ na onye na-emegharị vidiyo ga-eme ndị ọzọ. N'ịkọwa, anyị nwere ike ịsị na Free Make Video Converter bụ mmemme ntọghata vidio na-adaba adaba nke ga-agbaso ihe ọ bụla dị mkpa.
Ntị: O doro anya na, na installer nke usoro ihe omume ahụ, mmemme ndị nwere ike ịmeghị na-adịbeghị anya (mgbe ịdechara nyochaa), na nke 2017, onye ntụgharị ahụ malitere itinye ihe nkiri na vidiyo na-enweghị akwụ ụgwọ. Eleghi anya i kwesighi iji ozo vidio a, kama oburu na akwukwo gomenti:http://www.freemake.com/ru/
Rịba ama: ihe omume ahụ kwụsịrị site na saịtị ọrụ ahụ maka ihe ụfọdụ, yabụ ibudata ya n'ebe ahụ agaghị arụ ọrụ.
Amaara m na Icecream Media Converter (ma ọ bụghị naanị vidio, ma ọdịyo) site na ohere na akwụkwọ ozi, echekwara m na nke a bụ otu n'ime usoro kachasị mma nke a, karịsịa maka onye ọrụ na-enweghị onye ọ bụla (maọbụ ọ bụrụ na ịchọghị ịghọta ya n'ụzọ zuru ezu) n'ụdị dị iche iche, mkpebi na nsogbu ndị ọzọ yiri nke a), dakọtara na Windows 8 na 8.1, M nwalere na Windows 10, ihe niile na-arụ ọrụ kacha mma. Ntọala bụ n'efu na ngwanrọ na-enweghị isi.
Mgbe echichi, ihe omume ahụ amaliteghị na Russian, mana ọ bịara bụrụ nke a na-enweta site na bọtịnụ ntọala. N'otu ntọala ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ nchekwa ahụ iji chekwaa vidiyo ma ọ bụ ọdịyo ahụ gbanwere, họrọ ụdị faịlụ nke a ga-agbanwe isi iyi ahụ, yana ụdị njem:
Ngwaọrụ - na nhọrọ a, kama ịkọwa usoro ahụ na aka, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ngwaọrụ, dịka ọmụmaatụ, iPad ma ọ bụ tablet Android
Nhazi - họta usoro na aka, yana gosipụta àgwà nke faịlụ ahụ.
Ọrụ nile nke nsụgharị vidiyo na-abịa n'okpuru isi ihe ndị a:
Pịa "Tinye faịlụ", dee faịlụ na kọmputa na nhọrọ nhazi.
Pịa bọtịnụ "Tọghata" iji tọghata usoro ozugbo ma ọ bụ "Tinye ka depụta" - ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na ọtụtụ faịlụ ozugbo.
N'eziokwu, ndị a bụ ọrụ niile dị na ngwaahịa a (ma e wezụga maka mgbochi aka mgbe ị rụchara ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa), mana n'ọtụtụ ọnọdụ, ha ga-ezu karịa iji nweta nchọta a choro (na ọ bụ nke a bụ nlele vidio na-enweghị nsogbu na ngwaọrụ mkpanaka). ngwaọrụ). Ụdị vidiyo akwadoro gụnyere: AVI, MP4, 3GP, Mpeg, WMV, MKV, FLV. Ịnwere ike ibudata free Icecream Media Converter site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. //icecreamapps.com/ru/Media-Converter/ (agaghịkwa adị).
Nke a na - emechi nyocha a nke ndị na - emegharị vidio n'efu. Enwere m olileanya na otu n'ime ha dabara na mkpa gị.
https://termotools.com ig.termotools.com © Windows 2019